Nke Austria | mepụta ọdihu ka nma
A ma ama na Austria
Ọ na-ekpo ọkụ na Austria
Omume na Austria
Owuwu na ebe obibi
Họrọ usoro dị mma!
Companieslọ ọrụ ndị na-adịgide adịgide
Banyere nhọrọ | FAQ
Itu votu - Obodo ozo
Akụkọ a na-elekarị anya
GDP bụ ihe mgbe ochie?
Ejiji Dị Mma - Eziokwu Ezighi ezi
Hotel Chesa Valisa: onye ọsụ ụzọ na Bio Hotels
Kedu ihe kpatara mgbakwunye Superfood & Nri?
Ndị ọzọ na Ngwaahịa Google | Akụkụ 3
Aka nke abuo maka ekeresimesi
N'okpuru ike - ruo ebe nke ike eletrik na Austria
Otutu-billionaire Rene Benko kpọrọ oku na ndị amaala Austria si na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbasa ozi, akụ na ụba ...
Ugbu a hụrụ ya ugboro ugboro
in Ozi si na ụlọ ọrụ ndị na-adigide
# Mgbu mgbu - ọ naghị esiri onye ọ bụla ike ichebe. Cargbọ ogologo ụgbọ ala, ọrụ ịnọ nkịtị
in Akụkọ banyere ndị NGO
#wirsindsauer - ya na video
in Ndi ozo, Austria
Kalenda biakwa obibia kalenda
Nnyocha: Ego buru ibu na ego ezighi ezi
Ndi isi nkwado anyi
Mmiri dị ọcha na Didiksa - obodo nta Etiopia na-agbanwe ụwa - na vidiyo
nke Ndi mmadu
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ n'ime ime obodo Etiopia, enweghị ịnweta mmiri ọ drinkingụ cleanụ dị ọcha na Didiksa. Ruo mgbe anyị 2018 na onu ogugu ndi mmadu [...] ọzọ
Prostimme Contra olu
LinkedInXINGTumblrRedditFlipboardtelegrammailGoogleDiggStumbleUponVkBiputeNa-atọ ụtọechekwaIdenye ahaWeibon'akpa uweMailrumeneameOdnoklassnikiManagewpLineYummlyFrypeSkypehacker News
N'inwe obi ụtọ dị ukwuu, e kwere ka anyị mee ka ntutu na ntutu isi CULUMNATURA asatọ ...
Mit großer Freude durften wir wieder acht CULUMNATURA Haut- und Haarpraktikerinnen zertifizieren. Sie haben alle 8 Module der ganzheitlichen CULUMNATURA #Akademie abgeschlossen und gehen mit […] ọzọ
Ikike ụmụaka na SDGs - ọ bụ maka anyị na ụwa anyị!
nke Fairtrade Austria
Kwa afọ anyị na-eme emume na 20. Nọvemba Nọmba Children'sbọchị #mụaka wee dọta uche na "Mgbakọ na ikike ụmụaka". N'afọ a enwere [...] ọzọ
in Austria, Videos, Ogbe ndi otu na ndi NGO
Havemụaka nwere nrọ - ụmụaka nwere ikike
Havemụaka nwere nrọ - ụmụaka nwere ikike ọzọ
in Ndi ozo, Austria, Ogbe ndi otu na ndi NGO
Children nrọ? Ruuru ụmụaka!
+++ Rightsbọchị Rightsmụaka Kwesịrị Ka Children'smụaka Na-ahụ Maka + Whatwa + Gịnị ka nwatakịrị kwesịrị iji bie ezigbo ndụ? Enwere azịza doro anya nye ajụjụ a. [...] ọzọ
Nhọrọ dị mma site na ozi-e!
Echegbula, anyị agaghị spam!
Site na ọnọdụ mgbede a, a na m asị mba Etiopia kụọ Heimr ...
Site na ọnọdụ mgbede a, a na m asị mba Ethiopia ma bido njem n'ụlọ. Nwee mgbede dị mma. Alexandra, MfM Vienna nke Abuna Ginde Beret [...] ọzọ
Site na ngwa Dreckspotz anyị (www.global2000.at/dreckspotz) maka nchịkọta mkpofu nwere ike…
nke 2000 zuru ụwa ọnụ
Na ngwa Dreckspotz anyị (👉 www.global2000.at/dreckspotz) maka mkpofu ahihia, ị nwere ike sonye na Citizen Science Award, ma nyere ndị nkịtị aka na ọrụ nyocha sayensị. Taa, ezi [...] ọzọ
Taa bụ nnukwu ụbọchị. Peter Krasser nke Ethiopialọ Akwụkwọ Etiopia na-aga Abu ...
Taa bụ nnukwu ụbọchị. Peter Krasser sitere na Verein Schule Ethiopien gawara Abuna Ginde Beret ya na ụfọdụ ndị na - akwado Austria si [...] ọzọ
"Ọbụna nwamba na-egwu olulu maka azụmahịa ha. Kedu ihe kpatara anyị ji etinye ihe egwu ...
"Ọbụna nwamba na-egwu olulu maka azụmahịa ha. Yabụ kedu ihe ga-ebute ọrịa ndị dị ize ndụ mgbe ọ dị mfe iru ụlọ mposi? "[...] ọzọ
*** Ntụziaka n'ọnụ ***. N'ikwu okwu banyere kọfị - ị maralarị akwụkwọ nri kọfị anyị? The ...
*** Ntụziaka n'ọnụ ***. N'ikwu okwu banyere kọfị - ị maralarị akwụkwọ nri kọfị anyị? Na mgbakwunye na ozi banyere azụma kọfị, okwu a nwere Ezi ntụziaka maka efere ndị na-ekwu maka ahia ziri ezi [...] ọzọ
You nwere ike iche n’echiche ịkesa ndị 6.000 mmiri n’ụlọ gị? ...
You nwere ike iche n’echiche ikesa ndị 6.000 mmiri n’otu ụlọ gị? Maka ndị bi na Falo na Jeldu bụ eziokwu. [...] ọzọ
Have nwere ọdachi ọ bụla na gburugburu ebe obibi? ...
Have nwere anya maka ọdachi niile metụtara gburugburu ebe obibi? Ọkụ, oke ide mmiri, ụkọ mmiri ozuzo, oke ikuku na ide mmiri ❄️ na akụkụ dị ukwuu nke Austria - niile dakwasịrị? [...] ọzọ
OPUS - "N'abali Na Opera 2019"
N'ime izu anọ ọ ga-abụ oge ọzọ na Opus ga-ajụ "Tonight At The Opera" na ọtụtụ ndị ọbịa gaa Graz Opera. N'ihi na nke isii [...] ọzọ
"Ọrụ m bụ inweta ezinụlọ m mmiri kwa ụbọchị.
"Ọrụ m bụ ịkpọtara ezinụlọ m mmiri kwa ụbọchị na mụ na enyi m Ebise, anyị na-aga olulu mmiri ọhụrụ anyị. [...] ọzọ
Akwụkwọ nri pụrụ ime gị obi ụtọ. Youngmịnye abụọ nke ndị ọrụ ugbo anyị nke usoro…
Akwụkwọ nri pụrụ ime gị obi ụtọ. Obviouslymụ ọdụdụ abụọ nke Asmara anyị nwere ọ farmerụ na-anụ ụtọ swd fresh. A nabata ya na mgbanwe na menu yana [...] ọzọ
Nchebe nnụnụ: otu esi enye ụmụ nnụnụ ahụ ụlọ
Ọbụghị naanị nfuli na a beesụ, ọbụna nnụnụ 🐦 nwere ebe obibi na nri na-erughị ala. Kedu ka anyị ga - esi nye ha ụlọ n'ime afọ [...] ọzọ
Ilu anyị na Sọnde kwụsịtụrụ. Kama, anyị chọrọ ihe mmadụ maka gị…
Ilu anyị na Sọnde kwụsịtụrụ. Kama, anyị chọrọ ịma aka gị dịka mmadụ. N'ime izu ndị na-abịanụ, anyị na-ewebata onwe anyị na gị Sọnde ọ bụla obere [...] ọzọ
Ọzọkwa ụwa nke Fanayse ga-agbanwe n'ọdịnihu maka ọdịmma. O nwere e…
Ọzọkwa ụwa nke Fanayse ga-agbanwe n'ọdịnihu maka ọdịmma. O sonyere na otu nkuzi nke ntutu isi anyị, nke na-enye ya ezigbo ego [...] ọzọ
Antwa nke Antenne na ezinụlọ ya agbanweworị. O nwere onye k…
Antwa nke Antenne na ezinụlọ ya agbanweworị. O kere obere paradaịs. N'ubi ya na-eto pọọpọ, unere, apụl, ihe dị iche iche [...] ọzọ
Ntinye ntutu na-enweghị agba »HAIRMONIE edozi isi
nke Ihe eji egbu egbu na ntutu
Na-agụgharị 🤩📚 ring na -eme ntutu gị enweghị agba - nke a ọ ga - ekwe omume? Anyị! You nwere ntutu nwere agbaji agbaji na ọ na-akpọ nkụ? Wee nwalee Henna: Ọ na - emegharị ihe [...] ọzọ
Nri abalị ahụ ebidolarị? Anyị na-akwado ndụmọdụ oyibo-lime supplement ...
Nri abalị ahụ ebidolarị? Anyị na-akwado ofe oyibo-lemon ume ọhụrụ! Maka ndị 4 ịchọrọ: - ụyọkọ 1 nke coriander, chopped - 1 Organic Fairtrade lime, weputara [...] ọzọ
Gosi na iwe were gị - bukwara na profaịlụ profaịlụ gị! ...
Gosi na iwe were gị - bukwara na profaịlụ profaịlụ gị! 😠 Anyị azụpụtala ihe osise profaịlụ, yabụ ị nwere ike iji ya rụọ ọrụ anyị ngwa ngwa [...] ọzọ
Taa ka anyi choro iji obi oma gha agwa gi okwu nke oma maka izu uka nke…
Taa, anyị chọrọ iji ntị gị ga - ekwu okwu ọma banyere gị na - ekwu okwu na - echetara anyị otu ihe dị mkpa: na mmadụ ọ bụla nwere ike inye aka na-eme ka ụwa [...] ọzọ
Obodo ime obodo Etiopia na - agbanwe ụwa - ịnabata Didiksa - ya na vidiyo
Menschen für Menschen na-anọchi anya ụkpụrụ dị mkpa nke mmadụ na ịdị n'otu. Ihe a na-elekwasị anya bụ ndị mmadụ mgbe niile. Ha niile n'otu n'otu. [...] ọzọ
Ndi obodo Didiksa gbara mbọ na mmepe nke…
Ndi mmadu n’obodo Didiksa kwesiri igbali n’ime obodo ha. Anyị na-akọ akụkọ ha na otu anyị si arụ ọrụ [...] ọzọ
Remember chetara Birye nwaada si na akwụkwọ Nagaya anyị? H h ...
Remember chetara Birye nwa agbọghọ ahụ si na akwụkwọ Nagaya anyị? O nwere nnukwu goiter, a na-ejikwa ya. Anyị nwere ha taa [...] ọzọ
Shoppingzụ ahịa n’oge, gịnị ka ọ pụtara?
Attention na-elebara oge ya anya mgbe ị na-azụ ihe? Daysbọchị na-adị nkenke na obodo Paradeiser na-eto eto na-eto eto na ubi. 🍅 Oge maka [...] ọzọ
Anyi alaghachila na Etiopia ma taa anyi nwere ezigbo ulo…
2 mbak7 votes
Anyị abịaghachila na Etiopia ma sorokwa onye ọrụ ngo Gebeyehu rụ ọrụ ebe a na - ewu ewu taa. N'oge na-adịghị anya, ịsa nke abụọ nke ọha 💦 [...] ọzọ
in Ndi ozo & echiche
Ngwa ahịa ịdị ọcha nke ụmụ nwanyị, ụtụ isi belata na mgbasa ozi populist
2 mbak1 comment11 votes
nke Helmut Melzer
Kwesịrị ịtụ ụtụ ngwaahịa ọcha ụmụ nwanyị na mbelata? Ajụjụ na-ere ọkụ na Austria, nke usoro mgbasa ozi na-ebukwa eziokwu. Nke kachasị, ORF wetara akụkọ [...] ọzọ
Anyị bụ onye na-edozi isi nke nwere nkwenye zuru oke - ma na-eme ya kemgbe 30 J…
Anyị bụ onye edozi isi nke nwere nkwenye zuru oke - ma na-eme ya kemgbe ihe karịrị 30.🍃👍 A na-eji echiche azụmaahịa eme ihe maka ịnụ ọkụ n'obi maka ezigbo, eke na nke mbụ. [...] ọzọ
Nke ahụ bụ ngosi nnabata nke 2019! Obi dị anyị ezigbo ụtọ maka nleta…
Nke ahụ bụ ngosi nnabata nke 2019! Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu maka nleta nke Tekle Tadesse Gelgele, ndị kọfị FAIRTRADE si Ethiopia na ọtụtụ ndị [...] ọzọ
Echefula: Jiri ohere ọchịchị onye kwuo uche ya wee banye K…
Echefula: Jiri ohere ọchịchị onye kwuo uche ya banye ma debanye arịrịọ mgbanwe ihu igwe! Wir #wirsindsauer #notmyklimaplan #climateprogram ugbu a ọzọ
Taa, tupu afọ 38, Karlheinz Böhm guzobere nzukọ Menschen für Mensch ...
Taa, tupu 38 afọ gara aga, Karlheinz Böhm guzobere nzukọ Menschen für Menschen ma si otu a tọọ ntọala maka "enyemaka iji nyere onwe ya aka" maka ọtụtụ nde [...] ọzọ
Ezigbo iwe were anyị na a naghị eme ihe ọ bụla megide nsogbu ihu igwe.
Anyị nwere ezigbo iwe na enweghị ihe ọ bụla megidere nsogbu ihu igwe! 😠 Iwe na-ewekarị gị? Mgbe ahụ gosi ya! Were foto nke [...] ọzọ
Daybọchị ọ bụla nwere ike ịbụ "ụbọchị ntutu dị mma". N'ihi na #Haargel nke Herbanima nyere…
Daybọchị ọ bụla nwere ike ịbụ "ụbọchị ntutu dị mma". 😉 N'ihi na #Haargel nke Herbanima na-enye ihe na-enwu, ma na -akwu ma na-akọwa curls. Onye inyeaka bara uru maka [...] ọzọ
Knowmara FAIRTRADE nke ọma na ịchọrọ ịnụ ọkụ n'obi maka echiche nke ka mma ...
Know mara FAIRTRADE nke ọma ma chọọ ịkwalite ịnụ ọkụ n’obi maka echiche ụwa nke ka mma? Mgbe ahụ ị ziri ezi na anyị - itinye [...] ọzọ
Anyị na-achọ gị ka mmalite dị mma banye n’ime izu…
Anyị ga-achọ gị ka mmalite dị mma banye n’ime izu-. Isi mmalite ọzọ
Akwukwo Attac 2019 / 2 na-ekpo ọkụ na pịa na igbe akwụkwọ ozi nke ndị otu anyị na ...
Akwukwo Attac 2019 / 2 dị ọhụrụ site na akwụkwọ akụkọ na igbe ozi nke ndị otu anyị na ndị nyere onyinye. N'ime ihe ndị ọzọ nwere isiokwu: #Klimagerechtigkeit, #Mercosur, #Konzerne na #Treuergerechtigkeit na akụ na ụba #Transform na [...] ọzọ
N'ụbọchị taa World Science for Peace na Development, anyị chọrọ ka…
N'ụbọchị taa nke Science for Development na mmepe, anyị ga - achọ ịnụ gị n'aka: ụmụ akwụkwọ ole ka ha gụchara otu ụzọ agụmakwụkwọ maka agụmakwụkwọ atọ na Igwe Ọdụdọ [...] ọzọ
Site na ndu ezi ndu, obughi na aru gi ghari uru, kamakwa aru nke ...
Site na ndu ezi ndu, obughi na aru gi nwere uru, kamakwa ntutu gi. Karịsịa na oge oyi, ị kwesịrị: ► nwere mmiri zuru oke [...] ọzọ
#Anyị na-enwe oke nchegbu n’ihi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị Austrịa anaghị ewepụta usoro nhazi oge ọhụụ maka ịnagide nsogbu ihu igwe! 😠 #NotMyKlimaplan ị yiri? Mgbe ahụ biputere foto nke gị, [...] ọzọ
Ka ụbọchi na-adịwanye mkpụmkpụ, oge oyi na-ajụwanye oyi, ọtụtụ na-ata ahụhụ ...
Ọ bụ ihe nwute, mgbe ụbọchị na-agbadata, ihu igwe ana-ajụkwa oyi, oyi na-amalite ọtụtụ - ọ dị mwute na, na ọfịs anyị, o nwekwara ụfọdụ [...] ọzọ
3. Nnukwu "Ezigbo ego - itinye ego na uru kwukwara ya"
nke Gburugburu ebe obibi nke Raiffeisenbank Gunskirchen
Laghachi mgbe ị na-eme ihe maka gburugburu ma ọ bụ obodo ka mma? Nke ahụ ọ̀ ga-ekwe omume? Ee, kwuo ndị ọkachamara nke 3. [...] ọzọ
Nnyocha Öko-dọrọ aka ná ntị megide ọrịa carcinogenic na ihe ndị na-eme ka ihe na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaahịa na-elekọta egbugbere ọnụ
Lee ihe ịtụnanya: nnwale banyere ihe ọkụkụ na-adọ aka ná ntị banyere egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ. Anyị nwere ike ime ka obi sie gị ike: LIP CARE facile bụ mmanụ mmanụ na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ kpamkpam. Naanị NATURE nwere ike [...] ọzọ
aha njirimara Passwort
50 ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya
Ihe omume & Demos
in Ihe omume na ngosi, Austria
Grätzloasen nke Vienna na-eme ncheta PARK (ing) Day 2019
Cleanbọchị nhicha nke ụwa 2019
nke Karin Bornett
Ntinye Grätzloasen maka 2020
Atumatu na aririọ
in Atumatu na aririọ, Austria
Osisi na-awagharị awagharị adé!
NaDiVeG na-agbadakarị maka ọdịmma otu
nke Ihe osise Silvia
Green na-acha akwụkwọ ndụ - Mee ka ihe jọrọ njọ: missionkwenye na-ajụkwa Obodo
in Atumatu na aririọ, Austria, Civil Society & NGO
Arịrịọ na ebumnuche dị na Austria
in Atumatu na aririọ, Austria, Videos
# Nkpuru osisi. Naanị mee ya. Chedo ihu igwe.